संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्ने दाहाल–नेपाल समूहलाइ किन चाहियो चुनाव चिन्ह : गृहमन्त्री थापा - CNN EXPRESS
संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्ने दाहाल–नेपाल समूहलाइ किन चाहियो चुनाव चिन्ह : गृहमन्त्री थापा
फागुन ८, काठमडौं । गृहमन्त्री एवं ओली समूहको नेकपाका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले दाहाल–नेपाल समूहलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थपानाको माग गर्नेलाई चुनाव चिन्ह किन चाहियो भनेर प्रश्न गरेका छन।
शनिबार विराटनगरमा जारी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले चुनावको विरोध गरे पनि दाहाल–नेपाल समूहले भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरेको जिकिर गरे। ‘यदि चुनावको तयारी नगरेको भए किन चाहियो चुनाव चिन्ह ?’, उनले भने, ‘चुनाव चिन्हको लागि निर्वाचन आयोगलाई दबाव दिइरहेका छन् ।’ तर त्यो सम्भव छैन ।
गृहमन्त्री थापाले मुलुकलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रयास भएको बताएका हुन् । ‘आज हामी एउटा असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं । आज सदन विघटन भएको छ । आज यो देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रयत्न गरिएको छ, प्रयास गरिएको छ ।
किन आज यो परिस्थिति सिर्जना भयो रु किन फेरि यो देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने षडयन्त्र गरियो ? उनले भने, ‘यो देशमा अस्थिरता उत्पन्न कुनै बाह्य शक्तिहरूद्वारा होइन स्यम् हाम्रै आन्तरिक पंक्तिबाट अस्थिरताको षडयन्त्र रचियो । देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने योजना, षडषन्त्र रचियो । आजको यो परिस्थिति हाम्रै पंक्ति हाम्रै पंक्तिबाट हाम्रै भित्र लुकेका अवसरवादीहरू गुटवादीहरू पद लोलुपहरूले जन्माएका हुन् ।
गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई संवैधानिक भएको जिकिर गर्दै विराटनगरमा उठेको जनसागरले अनुमोदन गरेको बताए।
त्यस्तै गृहमन्त्री थापाले भागरथी हत्याकाण्डको आरोपी पक्राउ गर्नुले पनि सरकार जनताको सुरक्षामा कति संवेदनशील छ भन्ने देखिएको दाबी गरे । साथै उनले प्रहरी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्याराको नजिक पुगिसकेको जानकारी दिए।
Previous: नेपाली कांग्रेस हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा जनमत संग्रह गराउने पक्षमा छ : डा. शशांक
Next: प्रतिबन्ध ‘फुकुवा’ गरे सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक छौं : नेत्रविक्रम चन्द [विज्ञप्ति सहित]